Tirada codbixiyayaasha Somaliland oo la shaaciyay - BBC News Somali
Image caption Xubnaha guddiga doorashada Somaliland
Gudiga doorashooyinka Jamhuuriyada iskeed ugu dhawaaqday madaxbannaanida ee Somaliland ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay tirada guud ee codbixiyaasha doorashada madaxtooyada ee 13 Nofember la qaban doono.
Tirada codbixiyayaasha la diiwaangeliyay waxay gaareysa 704,089 (todoba boqol iyo afar kun iyo siddeetan iyo sagaal qof).
Munaasabad lagu qabtay xarunta Gudiga Doorashooyinka ayaa lagaga dhawaaqay in dadka la diiwaan geliyay oo keli ah codeyn doonaan.
Sida uu sheegay gudoomiyaha guddiga, Cabdilqaadir Iimaan, wuxuu sheegay in qofka codbixiyuhu uu ka codeyn karo oo keli ah goobtii uu hore isaga diiwaangeliyay ee gobolkiisa.
Munaasabadda waxaa ku sugnaa wakiilo ka kala socday saddexda xisbi ee ku tartamaya doorashada, wasiirka arimaha gudaha, iyo saxaafadda.
Goobaha codeynta ee Somaliland ayaa gaaraya 1,642, oo la sheegay in ay yihiin laga soo bilaabo min lawyacaddo ilaa taleex.
Sida guddiga doorashada uu sheegay degmooyinka Dhahar iyo laasqoray ee gobolka Sanaag kama aysan dhicin diiwaangelin.
Axsaabta siyaasadda ayaa soo dhoweeyay howsha uu qabtay guddiga oo soo bandhigay teknolojiyad cusub oo ay ka caawiyeen shirkado laga leeyahay Irland iyo Faransiiska.
"Qofkaysan u suuragalin in uu qaato kaarkiisa codeynta, wuxuu qaadan karaa doorashada madaxweynaha ka dib. Kuwa 16-ka sano gaarayna xilligaas ayey qaadan karaan," ayuu yiri Saciid Cali Muse, Afhayeenka guddiga doorashada oo ka jawaabayay su'aal uu weydiiyay Weriyaha BBC-da Axmed Saciid Cige oo ahayd waxa ay sameyn karaan dadka aan fursad u helin in ay helaan kaararka.
Tirada gobolkasta iska diiwaangelisay
Tirada codbixiyaasha rasmiga ee Gobollada jamhuuriyadda iskeed madaxbannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland waxay kala yihiin:
Ololaha doorashada ayaa la filayaa in uu bilowdo bishan dhexdeeda. Axsaabta siyaasadda waxay dadka u bandhigi doonaan waxa ay qabanayaan.
Qalabka doorashada iyo warqadaha codeynta ayaa dhowaan la geeyay Hargeysa. Doorashada waa mid ay ku oo keli ah musharrixiinta xilka madaxweynaha.
Lahaanshaha sawirka Guddiga doorashada Somaliland
Image caption Tirada codbixiyayaasha
Dhowaan,wafdi sare oo ka socday dalal caalami ah ayaa booqday Hargeysa, kuwaas oo soo eegayay sida ay u socoto qabanqaabada doorashada bisha soo socoto ee Jamhuuriyadda iskeed madaxbannaanida u dhowaaqday ee Somaliland.
Maqal Wareysi Gudoomiyaha Baarlamanka Somaliland
Maqal Waraysi: Madaxa hay'adda shaqaalaha Somaliland